Magaalada Kismaayo oo ku dhow in Gacanta Kooxda Waraaba Cunka laga saaro
Ciidamada Dowlada iyo Kuwa Midowga Africa gaar ahaan Kenya ayaa ka wada Gobalka Jubada hoose guluf dagaal kii ugu dambeyay oo Kooxda Malshabaab loga xureenaayo Magaalada Xaruunta ee Kismaayo.
Ciidamada Dowlada Soomaaliya oo Kaashanayaa Malayshaadka Raaskambooni iyo Militariga Kenya ayaa Culeys dagaal ku haayaa Kooxda waxaana ay ku qasbeen Horjoogayaasha Kooxda in ay durbaba dhinaca Dhulka Keynta ah ah u baxsadaan mar hadii lagu soo dhowyahay Kismaayo.
Malayshaadka Alshabaab oo rajo xumo iyo niyad jab uu ka muuqdo iyo ciidamada howanta ayaa isku farasaaray shalay magaalada Kismaayo meel u jirta ilaa 26 KM malayshiyaadka ayaa markii ay ogaaden in Magaalada Marka laga qabsaday Kooxdooda waxaa ku sii batay Niyad xumida iyo walaaca qaarkood ayaa dib Kismaayo ugu soo laabtay iyagoo xitaa aan hal xabad ridin.
Gudoomiyaha Kismaayo Xasan Yacquub Cali oo Magaca logu waqlalay yahay Deerow Isaaq Madkeer balse magaciisa saxda u badalay in uu jahwareeriyo Soomaaliada ayaa amar ku siiyay ciidanka isaga ka amar qaata In ay dilaan qofkii ay u arkaan in uu u riyaaqayo cadawga ku soo wajahan sida uu hadalka u dhigay waxaa kale oo uu tilmaamay in dadka aysan magaalada ka barakicin isla markaana ay guryahooda ku qariyaan
Mujaahiliinta hadii awood lagu maquuniyo.
Magaalada ayaa xiligan ah mid aad u kacsan dadkuna waxaa ay hoosta uga guuxayaan Allow na dhaafi balaayadan Hilibka Waraabaha hala cuno dadka ku qasbaya hadii ay sii joogaa Hilibka Dameerka ayeey dadka ku Qasbayaan si la mid ah sida qaarkood ay aaminsanyihiin ama lagu arkay ficilkooda dad cunimada ah.
Culeys Sanado badan haayay ka dib dadka Kismaayo oo Maalmaha soo socda rajeenaaya in ay ka xuroobaan gacanta gumeysiga Al-qaacida ee u shaqeyneysa danaha Cadawga Muslimiinta Caalamka.
Kismaayo waa magaaladii lagu kufsaday ka dibna dhagax lagu dilay Caisha Dhuxulow oo aheed gabar aan qaangaarin oo Malayshaadka Kooxda marka ay kufsadeen hadana ku ciqaabay in dhagax lagu dilo marka magaalada laga saaro ma qiyaasi karta jariimooyinka dadka magaaladaas ay la kulmeen mudadii dheereed ee lagu dul fadhiyay allow u fududeey dadkaada dhibaatadu haysa.